M/wayne Shariif oo degmooyin kalle magacaabay, xilli ay golaha wasiirada ay sharci darro ku tilmaamayn degmooyinka xiligaan la magacaabayo – Radio Daljir
M/wayne Shariif oo degmooyin kalle magacaabay, xilli ay golaha wasiirada ay sharci darro ku tilmaamayn degmooyinka xiligaan la magacaabayo
Agoosto 11, 2012 12:21 g 0
Muqdisho, Aug 11 – Madaxwaynaha dowladda faderaalka KMG ee Soomaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta degmooyin u magacaabay tuulooyin katirsan gobolada Bakool iyo Gedo ee koonfur galbeed Soomaaliya, xilli ay golaha xukuumaddu ay dhawaan sharci darro ku tilmaameen wareegtooyinka lagu magacaabayo degmooyinka oo lagu soo beego waqtiga kala guurka oo ay dowladdu ku jirto.
Sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda arimaha gudaha iyo amniga Bashiir Maxamed Jaamac, madaxwaynaha ayaa degmooyin u aqoonsaday tuulooyinka Dhurey iyo Karaaban oo kakala katirsan gobolada Bakool iyo Geddo.
Wareegtadan ayaa imaanayso maalmo ka hor markii madaxwaynaha uu sidaan oo kalle wareegto uu kasoo saaray xafiiskiisa uu degmooyin uu ugu magacaabay tuulooyinka Ceel Axmed iyo Ceel Baraf oo ka mid ah dhulka Al-Shabaab ay maamulaan ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
R/wasaraaha xukuumadda iyo Golihiisa wasiirada ayaa qaba in magacaabista degmooyinka cusub ee aan golaha la horkeenin aysan waafaqsanayn nidaamka dowliga ah, sidaas darteedna laga soo bilaabo 01, July 2011 ilaa 31, August 2012 wixii dagmo ah oo la magacaabay ay yihiin sharci darro.
Arimahaan ayaa kusoo beegmaya xilli jiritaanka waqtiga xukuumadda ay ka harsantahay muddo 10-cisho ah.
Shiine Akhiyaar oo kasoo dhex-muuqday kulanka fanka qaarada Africa ee dalka Maraykanka (Daawo Sawiro)